Fiidiyo ugu Mac: Sida loo Connect fiidiyo ugu Mac (Mavericks ka mid ah)
> Resource > Mac > Sida loo Connect fiidiyo ugu Mac
Xiriirka fiidiyo ah in Mac ma aha mid aad u adag oo aan si ka duwan yahay waxa xidhiidhinaya PC ah, laakiin waa in la sameeyo si sax ah si loo gaaro natiijo fiican. Habkan, waxaa lagu talinayaa in aad hubisaa in aad la socodsiiso haddii habka xidhiidhka ka shaqeeyaa iyo sida loo raaco tallaabooyinka saxda ah ka hor inta dhab ahaan iyaga isku xira sameeyo.
Ka dib markii ay ku xirmaan oo kala soo bixi files warbaahinta si Mac, aad u daawato aad media player jecel, ama badalo si kale qaabab video for tafatir dheeraad ah iMovie, Final Cut Pro, QuickTime, iwm
Waxa aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan fiidiyo ugu Mac:
A 6 pin ama pin 4 cable. Sida caadiga ah, kaamirada u baahan tahay dhamaadka ah 4 pin cable si ay u awoodi karaan in ay ku xidhmaan Mac ah, inkastoo mararka qaar ay u oggolaadaan in dhamaadka 6 qodob sidoo.
Talaabooyinka ee photos iyo videos dhoofinayo si Mac:
1. Hubi in fiidiyo ayaa lagu wadaa in habka saxda ah ee loo dhoofiyo sawiro iyo videos. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan hab oo ah in la doorto, ka eeg tilmaamaha lagu siiyay aad fiidiyo. Haddii aad fiidiyo uu leeyahay hab hurdo, hubi in uu yahay naafo ama qarka u saaran inuu ku darsan muddo dheer oo ku filan si ay u oggolaadaan sanamyadiinna oo videos download in a.
2. Tallaabada ugu horreysa waa in ay helaan dekedda afar-pin FireWire ku saabsan video fiidiyo. On ugu kaamirada video, waxaad ka heli doontaa waxa ku yaal hoos caag ama caag boot ah. Leave fiidiyo video ka shaqeeya off oo si fudud boot kor ka fiidiyo iyo geliso dhamaadka afar-pin yar oo cable FireWire ka galay Kismaayo FireWire ee fiidiyo ah
3. Marka fiidiyo ugu xiran yahay, qaado iyo darafkiisa kale inta cable FireWire ah, ka weyn lix dhamaadka ku qodobtay, oo geli dekedda FireWire ee Mac. Marka labada fiilooyinka ay ku xidhan yihiin, waxaad u tagi kartaa on awood u leh in aad video fiidiyo.
4. In xoogaa ilbiriqsiyo aad Mac waa in si toos ah abuurtaan iMovie. Raac tilmaamaha ku-screen aad Mac oo ay bilaabaan kala iibsiga video ka yimid video fiidiyo si aad Mac.
Talooyin ku xira fiidiyo ugu Mac :
1. Sidee si ay u daawadaan VHSs ama DVDs isticmaalaya Mac?
Haddii aad rabto in aad daawato VHSs ama DVDs by adiga oo isticmaaleya isticmaale Mac, sidoo kale waa suurto gal. In si loo gaaro hadafka sida, waxaad u baahan tahay sanduuqa Converter oo loogu badalo, inay signal qaldan video ka galay signal ah oo aad Mac aqoonsan lahaa ka dibna laguu ogolaado in aad si aad u daawato ah. Sanduuqa Converter Tani lahaa dhexe dhexeeya qalab kasta, iyo waxay keeni lahaa labada calaamadaha inay ahaadaan kuwo la socon kara.
Marka la sanduuqa Converter ka shaqeeya, waxaad u baahan doonto si aad u xirmaan il video iyo sidoo kale in ay Mac ah. Sidaas, waxaad u baahan tahay in aad u isticmaasho fiilooyinka lagama maarmaanka u ah labada xiriir, oo waa inaad hubisaa inay yihiin kuwa sax ah sameeyo. Waxaa lagula talinaayaa inaad barato sida loo gaaro ka hor inta in uu sameeyo. Haddii aad wax shaki ah, waa in aad had iyo jeer la tasho buugga qalab milkiile kasta ama wac adeegga macmiilka soo saaraha ee talo.
2. Sida loo isticmaalo video ka xiran ama dhisay-in fiidiyo iSight?
Waxa aad isticmaali kartaa adiga oo fiidiyo iSight si ay u qoraan video si toos ah mashruuca iMovie aad. Taas macnaheedu waxa weeye in aad si lama filaan ah ku dari kartaa clips in aad mashruuc halka aad uga shaqeeya. Just xiriiriyaan fiidiyo iSight dekedda FireWire ee Mac oo aad diyaar u tahay inay bilowdo duubo tahay. Haddii aad leedahay wax ka badan hal fiidiyo ku xiran, sida iSight ah iyo fiidiyo ah, ama aad leedahay iMac la dhisay-in-iSight dooran iSight ka menu pop-up oo u muuqata markii aad iska badasho hab fiidiyo ah. Alternative, aad u baahan tahay si loogu badalo fiidiyo ugu iMovie qaabab socon video, sida MOV. Baro fiidiyo ugu MOV video Converter u Mac (El Capitan taageeray).